मेस्सीका यस्ता छन् कीर्तिमान, जुन अरु कोहीलाई तोड्न मुस्किल’ पर्छ ! – Nepal Sandesh
स्पेनिस महारथि बार्सिलोनाका स्टार फरवार्ड लिओनल मेस्सीले खेल जीवनमा थुप्रै कीर्तिमान बनाएका छन् । उनी विश्व फुटबलका एक हस्ती हुन् । भन्नेहरूले त उनलाई विश्व फुटबलमा कीर्तिमानधारी खेलाडी नै भनिदिन्छन् ।उनै मेस्सीले क्लब फुटबल र राष्ट्रिय फुटबलबाट खेल्नेक्रममा थुप्रै विश्व रेकर्ड बनाएका छन् । आज हामीले बिबिसीको सहयोगमा खेल जीवनमा स्टार मेस्सीले बनाएका विभिन्न आठ विश्व कीर्तिमानबारे बुँदागत चर्चा गरेका छौं ।
मेस्सीका ती कीर्तिमान जो कोही फुटबल खेलाडीलाई आफ्नो खेल जीवनमा तोड्न मुस्किल पर्ने देखिन्छ । के–के छन् त त्यस्ता मेस्सीका कीर्तिमान ? हेरौं–
पहिलो– मेस्सी पाँचपटकका बालोन डि’ओर विजेता
लिओनल मेस्सी त्यस्ता खेलाडी हुन्, जसले पाँचपटकसम्म विश्व फुटबलकै सर्वाधिक ठूलो मानिने फुटबलको उपाधि बालोन डि’ओर जितेका छन् । अहिले उनको कीर्तिमानलाई स्पेनिस रियल मड्रिडका पोर्चुगिज स्टार क्रिस्यिटानो रोनाल्डोले बराबरी गरेका छन् । गत वर्षका लागि उक्त अवार्ड रोनाल्डोले पाएपछि उनले मेस्सीलाई भेट्टाएका हुन् ।
अब यो अवार्ड सर्वाधिक पाँचपटकसम्म जित्ने मेस्सी र रोनाल्डो मात्रै हुन् । मेस्सीले सन् २००९, २०१०, २०११, २०१२ र २०१५ यो उपाधि जितेका हुन् ।
दोस्रो – बार्सिलोनाका लागि सर्वाधिक गोल र असिस्टकर्ता
हाल उमेरले ३० वर्षमा हिँडिरहेका मेस्सी बार्सिलोनाका सर्वाधिक गोलकर्तासमेत हुन् । त्यसकासाथै, उनले अन्य खेलाडीलाई पास मिलाउने मामिलामा पनि रेकर्ड नै राखेका छन् । मेस्सीले यो समाचार तयार पारेको दिनसम्म बार्सिलोनाका लागि ६ सय २ खेल खेलेर ५ सय २३ गोल गरिसकेका छन् । त्यसैगरी, १ सय ९९ गोलका लागि पास मिलाएका छन् । क्लबमा अन्य खेलाडीलाई पास मिलाउने मामिलामा यो संख्या सर्वाधिक हो
तेस्रो– सबै टोलीविरुद्ध मेस्सीको गोल
लिओनल मेस्सी एक मात्र त्यस्ता खेलाडी हुन्, जसले ला लिगाको २०१२–०१३ को सिजनमा सबै टोलीविरुद्ध गोल हानेका छन् । बार्सिलोनाका लागि त मेस्सी सबै क्लबविरुद्ध गोल हान्ने एक मात्र खेलाडी हुन् । उनीबाहेक अन्य कुनै खेलाडीले हालसम्म एक सिजनमा सबै क्लबविरुद्ध गोल गर्न सकेका छैनन् । त्यसबेला मेस्सीले खेलेका २१ वटै खेलमा गोल गरेका थिए । यो रेकर्ड सायदै तोडिएला ।
चौथो– लिगको एउटै सिजनमा ५० गोल !
मेस्सी एक मात्र त्यस्ता खेलाडी हुन्, जसले ला लिगाको एकै सिजनमा ५० गोल हानेका छन् । यो रेकर्ड यदि कसैको नाममा छ भने त्यो मेस्सीकै नाममा छ । सन् २०११–२०१२ को सिजनमा मेस्सीले गोलसंख्यामा अर्धशतक हानेका थिए । स्मरण रहोस्, ठूला प्रतियोगितामा मेस्सीले राखेको यो कीर्तिमानलाई फुटबलकै इतिहासमा असामान्य मानिन्छ ।
पाँचौं– एक वर्षमा क्लब र देशका लागि ९१ गोलको रेकर्ड !
मेस्सीले खेल जीवनमा पत्याउनै नसकिने केही रेकर्ड बनाएका छन्, तीमध्ये अर्को एउटा रेकर्ड हो– एक वर्षमा कूल ९१ गोल । सन् २०१२ मा मेस्सीले बार्सिलोना र अर्जेन्टिनाका लागि गरेर कूल ९१ गोल गरेका थिए । यो रेकर्ड फुटबलकै इतिहासमा दुर्लभ रेकर्ड मानिन्छ । जब कि, मेस्सीको यो रेकर्ड तोड्न जो कोहीलाई पनि मुस्किल पर्ला ।
छैटौं– बार्सिलोनाका लागि एकै सिजनमा ७३ गोल !
मेस्सी एक मात्र त्यस्ता खेलाडी हुन्, जसले विश्व फुटबलको इतिहासमा एकै सिजन सबैभन्दा बढी गोल गर्ने कीर्तिमान आफ्नो नामा लेखाएका छन् । मेस्सीले सन् २०११–२०१२ मा ७३ गोल गरेका थिए । जसमा ५० लिग गोल, ३ कप गोल, १७ अन्तर्राष्ट्रिय गोल र ३ गोल अन्य त्यसमा समावेश छन् ।
जब कि, एकै सिजनमा यति धेरै गोल खेल जीवनमा जो कोही खेलाडीलाई गर्न मुस्किल पर्ला ।
सातौं- चौथो गोल्डेन बुट
मेस्सीले २०१६/१७ का लागि युरोपियन क्षेत्रबाट सर्वाधिक गोलकर्ताको हैसियतमा गोल्डेन बुट पाएका छन् । यसपटक उनले पाएको गोल्डेन बुट चौथो हो । अब युरोप क्षेत्रमा सर्वाधिक धेरै गोल्डेन बुट पाउनेमा रोनाल्डो र मेस्सी बनेका छन् । मेस्सीले यसपटक पाएर रोनाल्डोलाई भेट्टाएका हुन् । रोनाल्डोले यसअघि नै चारपटक यो उपाधि पाइसकेका थिए ।
आठौं– इएल क्लासिकोमा सर्वाधिक गोलकर्ता
बार्सिलोना र रियल मड्रिडबीच हुने चर्चित इएल क्लासिको भिडन्तमा मेस्सी सबैभन्दा बढी गोल गर्ने खेलाडी हुन् । मेस्सीले हालसम्म रियलविरुद्ध खेलेका ३६ खेलबाट २५ गोल गरेका छन् । उनका निकटतम् प्रतिस्पर्धी रियल मड्रिडका क्रिस्टियानो रोनाल्डोले २८ खेलबाट १७ गोल गरेका छन् । मेस्सीले पछिल्लोपटक डिसेम्बर २३ मा भएको इएल क्लासिकोमा पनि १ गोल गरेका थिए ।